गोविन्दामय र हिन्दीमय बन्दै नेपाली चलचित्र महोत्सव - Sutra TV Sutra TV
गोविन्दामय र हिन्दीमय बन्दै नेपाली चलचित्र महोत्सव
भूमि नेपालको भए पनि वीरगञ्जमा नेपालीभन्दा हिन्दी र भोजपुरी फिल्म बढी चल्छ । अहिलेका चल्तीका कुनै नेपाली कलाकारलाई त्यहाँका स्थानियले चिन्दैनन् । तर, भारतका कलाकार भनेपछि मरिहत्ते गर्छन् । त्यही ठाउँमा पहिलो पटक नेपाली फिल्म महोत्सव भएको छ, कात्तिक २१ गतेदेखि । नेपाली फिल्म र मधेशी जनताबीचको दूरी मेटाउने उद्येश्यले चलचित्र निर्माता संघको आयोजनामा कात्तिक २४ गतेसम्म नेपाल चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव चल्नेछ ।
बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको महोत्सवमा सहभागी हुन काठमाडौंबाट डेढ सयको संख्यामा कलाकारहरु वीरगञ्ज पुगेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उद्योगपति, व्यवसायी र फिल्म क्षेत्रबीचको दूरी कम गराइ फिल्म क्षेत्रमा लगानी भित्राउने उद्देश्य पनि रहेको महोत्सवको विशेष आकर्षण बलिउड अभिनेता गोविन्दा हुन् । कुनै समय बलिउडमा बलियो साम्राज्य बनाएका गोविन्दाको क्रेज नेपालमा पनि जबरजस्त छ ।
अझ नेपाल सिमावर्ती क्षेत्रमा उनका फ्यान अगन्य छन् । वीरगञ्जमा भइरहेको महोत्सवमा देखिएको उनको क्रेजले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ । साधारण दर्शकको मात्र नभइ नेपाली फिल्मकर्मीको पनि होडबाजी देखिएको छ, गोविन्दासँग नाच्न र फोटो खिचाउन । महोत्सवमा सहभागी हुन गएका नेपाली कलाकारबीच गोविन्दासँग फोटो खिच्न गजबकै हानाथाप देखिएको छ ।
साम्राज्ञी आरएल शाह, भुवन केसी, सन्दिप क्षेत्री, दीपाश्री निरौला, दीपकराज गिरी, विराज भट्ट, श्वेता खड्का, निकिता चाण्डकलगायतले गोविन्दासँग फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याएका छन् । नेपाली कलाकारको सामाजिक सञ्जाल गोविन्दामय बनेको छ ।
कलाकारको सामाजिक सन्जाल मात्रै होइन, चलचित्र महोत्सव पनि गोविन्दामय र हिन्दीमय बनेको छ ।
नेपाली चलचित्रको स्तरउन्नति र विकासको लागि गरिएको महोत्सवको पहिलो दिन नेपाली चलचित्रको गीतभन्दा हिन्दी गीत नै धेरै बजे । हुन त ठाउँ अनुसारको भेष र मागअनुसारको गीत होला । तर, महोत्सवमा गोविन्दाले हिन्दी गीतमा नाच्दा र नेपाली कलाकारले साथ दिँदा नेपाली चलचित्र महोत्सवको वजन घट्यो कि बढ्यो ? यो सोचनीय विषय हो ।
नेपाली चलचित्रको महोत्सवमा नेपाली गीत बजाएर अभिनेता गोविन्दालाई नचाउने कि उनको गीतमा उनीसँगै नेपाली कलाकारले पनि ठुम्का लगाउने ? गोविन्दासँग फोटो खिचाउन र उनीसँग नाच्न उत्साहित देखिएका नेपाली कलाकारले विगतमा भारतमा जाँदा बस्ने सिट समेत नपाएको पीडा विर्सेकै हुन् त ?
नेपाली भूमिमा गोविन्दाले हिन्दी गीतमा नाच्नु आपत्तिजनक विषय होइन । तर, उनीसँगै हिन्दी फिल्मको विरोध गर्नेहरु स्टेजमै हिन्दी गीतमा बुर्कुसी लगाउनु चाहिँ पाच्न भएन कि ? आज गोविन्दासँग हिन्दी गीतमा नाचेका नेपाली कलाकारले भोली बलिउडमा गएर नेपाली गीतमा नाच्न पाउँलान् त ? नेपाली कलाकारले बलिउडका कलाकारलाई गरेको सम्मान के नेपाली कलाकारले भारतमा जाँदा पाउँलान् ? यो महोत्सवले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।